Minneapolis:- Waxaa habeen hore lagu soo gabagabeeyay magaalada minneapolis ee gobalka Minnesota tartankii loogu magacdaray Koobka Ramadanka 2012 oo isagu si isdabajoog ah uga socday bishii ramadaanka oo dhan garoonka kubbadda cagta ee TC Indoor Sports Center.... Tartankaan isaga ah ayaa waxaa ku looltamayay 12 kooxood oo ka dhisan gobolka Minnesota kuwaasi oo kala ahaa TC Stars, Midnimo, Tigers, Communality, Halgan, Faynuus, Cedar Stars, Elman, Eden Prairie, Old Stars, 50 Stars iyo US Stars.
Tartankan ayaa waxaa qabanqaabadiisa iska lahaa dhallinyarada kala ah:A,Bayer(Xawaaji),Khadar Faa Cali, iyo Aflow , waxaana maalgaliyay milkiilaha Afro Deli Restaurant and Coffee mudane Abdirahmaan Kaahin oo isagu ka mid ah shakhsiyaadka sida aadka ugu ololeeya horumarinta isboortga dhallinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
Ciyaartii Finalka waxaa isugu soo haray labada kooxood ee Cedar Stars iyo TC Starts. Kooxda Tc stars ayaa iyadu 2 gool iyo 0 ku reebtay wareeggii Semifinalka kooxda Halgan, halka kooxda Cedar ay iyaduna rigorayaal ugu soo adkaatay kooxda faynuus markii ay isla dhaafi waayeen 2 gool iyo 2 gool cayaarahoohii semifinalka.
Ciyaartan oo ad faro badan oo iyagu magac iyo maamuus ku lahaa isboortiga Soomaaliya iyo dadweyne aad u faro badan oo iyaguna soo camiray garoonka kuwaasi oo kala taageerayay labada kooxood ee loolanka iyo xafiiltanku ka dhaxeeyay
Labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar deggan iyo kubbad wanaagsan. Kooxda TC ayaa kaga naxsatay hal gool markay ciyaarta socotay in ka yar toban daqiiqadood.
Kooxda Cedar Stars ayaa waxay soo qaadeen weeraro badan iyagoo fursado qaali ah lumiyay. Ciyaartoy khadka dhexe ugu dheela Cedar oo sitay lambarka 17aad ayaa kubada si wanaagsan u fur-furay, difaaca TC-siina qal-qaliyay.
Markii wareegii labaad dib laysugu soo laabtay ayaa ciyaaryahan afka hore ugu ciyaara TC starts waa Axmadeey uu u saxiixay goolkii labaad.
Ciyaaryahanka khadka dhexe iyo weerarka ugu ciyaara Cedar Stars Qureesh ayaa gool taraarax ah ka dhaliyay TC Stars. Mar qura ayaa taageerasha Cedar Stars oo garoonka ku badnaa luxeen sacab iyo sawaxan.
Qadar yar ka dib ayaa kooxda Cedar waxay fursad u haleen rigoore kadib markuu ciyaarhanka Tc Stars Mubarak oo uu gacanta ku taabay kubadda goosha dhexdeeda, laakin waa laga qabtay goolkaasi oo uma suurogalin inay dhaliyaan.
Waxaa guusha 2 iyo 1 ay ku raacday kooxda TC Starts. Kooxda TC Starts ayaa isla sanadkaan ku guuleystay koobkii lagu qabtay Ohio.
dabadeed waxaa halkaasi lagu bixiyay abaalmarinadii oo loo kala helay sidatan:
-Gudoomiyaha garoonka TC indoor Sports Center A. Bayer (Xawaaji) ayaa wuxuu gudoonsiiyay abaal marin Afro Deli Cabdiraxmaan Kahin oo suurta geliyay koobka Ramadanka 2012.
-Waxaa halkaa lifetime award achievement la gudoonsiyay C/raxmaan Amaan oo ka tirsanaan jiray xulka qaranka Soomaaliyeed, una ciyaaray kooxda Badroolka.
-Ali Talyaani ayaa gudoonsiiyay Abyan C/llaahi oo ahaa ruuxii ugu taagaaro badnaa intuu socday tartankan koobka Ramadaanka.
-Marshaale ayaa gudoonsiiyay Mahad kooxda Fc Faynuus Tababariihii ugu wanaagsanaa.
-Macalin Moorgan ayaa gudoonsiiyay Mahdi Yare Koobka MVP. Ciyaaryahankii ugu gool dhalis badnaa Ramadanka.
-A/qaadir Madaxey ayaa gudoonsiiyay Mo Mama Kooxda TC starts Goolii ugu wanaagsanaa.
-Tababare/Macalin Suudaani iyo Qariindi ayaa kale bixiyay kaalinta kowaad iyo labaad koobka.
Waxaa ciyaaraha daadihinayay wariye C/risaaq Calibos oo ah wariya madaxbanaan inta badan soo tabiya ciyaaraha gobalkaan.
Khadar Faa cali oo isagu ku hadlayay magaca guddigii qabanqaabada ee tartanka koobka ramadaanka 2012 ayaa wuxuu u mahadceliyay dhammaan kooxahii ka soo qaybgalay tartankaan iyo dadwaynaha u soo daawasho tagay inta uu tartankaani socday. Wuxuu u hambalyeyay kuwii guuleystay iyo kuwii lagu guuleystayba intaba.
A. Bayer (Xawaaji) iyo Shiikha